Global Voices teny Malagasy » Taratasim-pifandraisan’ny mpandika: Amazon, Google Translate, & maro hafa! · Global Voices teny Malagasy » Print
Taratasim-pifandraisan'ny mpandika: Amazon, Google Translate, & maro hafa!
Voadika ny 21 Oktobra 2019 5:04 GMT 1	 · Mpanoratra Marianna Breytman Nandika avylavitra
(Fanamarihana : Lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Oktobra 2015)
Tratry ny Alatsinainy finaritra daholo isika!
Antenaiko fa tsara fanombohana ny herinandronareo tsirairay avy! Androany eto amin'ny tanin'ny mpandikateny, horesahantsika ny…
Asa fandikana vatsian'ny Amazon
pikantsary nalaina tao amin'ny translation.amazon.com
VAOVAO GOAVANA! Ny 13 Oktobra 2015, nanambara ny marik'i Amazon, AmazonCrossing, fa hahazo vola 10 tapitrisa dolara izy hamatsiana ny fandikàna ho amin'ny teny anglisy ireo boky mba hahafahan'ireo mpamaky amin'ny fiteny anglisy ho afaka hahazo boky betsaka kokoa avy amin'ireo boky voasoratra tamin'ny fiteny vahiny. Vakio misimisy kokoa ao anatin'ny lahatsoratra iray nosoratan'i Quartz ato  sy ny fanambarana ofisialy an-gazety avy amin'ny Amazon tato . (Fanamarihan'ny mpandika: miserana iray segondra sisa ity rohy ity dia afeniny avy eo, saingy nahazoantsika pikantsary ihany na izany aza, ka aseho eto ambany)
Tena zavadehibe manokana ho an'ireo mpandika ho amin'ny teny anglisy izany, satria ianareo izany izao dia afaka misoratra anarana  hahazo fanazavana momba ny hahafahana manao ireo asa fandikàna sandaina vola!
pikantsary avy ao amin'ny googletranslate.blogspot.com
Mampiditra zavatra roa nasongadina tamin'ny faran'ny herinandro lasa ny Google Translate. Ao amin'ny bilaogin-dry zareo , izao no voasoratra:
“Efa azonareo atao sahady ny mahazo fifampiresahana aminà fitenim-pirenena roa, miainga avy amin'ny Alemàna na Anglisy mankany amin'ny teny Arabo noho ny fisian'ny endrika fifampiresahana na fampidirana lahatsoratra ao amin'ilay fampiharana Google Translate. Androany, nampiany ihany koa fahafahana mandika eo noho eo ny lahatsoratra vita printy ho amin'ireo fiteny ireo.”
Natombok'izy ireo ihany koa ny Split View ho an'ireo iPads hiaka farany, midika fa “raha toa ianao mandefa imailaka na lahatsoratra ka mila mandika, azonao atao ny mahita ireo fampiharana roa amin'ny fotoana iray mitovy.”
pikantsary avy amin'ny googletranslate.blogspot.com
Pikantsary nalaina tao amin'ny slator.com
Heverinao ve hoe kianja mahafaty ny indostria momba ny fiteny? Ivereno sainina fanindroany! Tao anaty lahatsoratra vao haingana navoakan'ny Slator, nasehon'ireo tatitra fa ireo tsirinasa (startup) fandikàna dia nahangona famatsiambola maherin'ny 231 tapitrisa dolara tao anatin'ny folo taona farany, “taratry ny firoboroboan'ny tsenan'ireo tolotrasa fandikana mitentina 38 lavitrisa dolara.” Vakio misimisy kokoa ato !
Torohevitra fametrahana tambajotra
Pikantsary nalaina tao amin'ny http://yourpolishtranslator.com/
Kasia Pranke avy amin'ny “Your Polish Translator” dia nanangona matihanina dimy misehatra amin'ny fiteny mba hitondra ho anao ireo torohevitra ho an'ny mpandikateny sambany mirotsaka ao anatin'ny sehatra. Natombok'izy ireo tamin'ny firesahana ireo hadisona mila sorohana (tapaka ny rohy) rehefa mametraka an-tambajotra ary mbola misy lahatsoratra roa fanampiny hoavy!
Toy ny mahazatra, isaorana ianareo rehetra tamin'ny asa mafy sy ny fandavantenanareo ho an'ny GV!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/21/140199/
 misoratra anarana: https://translation.amazon.com/gp/help?ie=UTF8&language=en_US
 bilaogin-dry zareo: http://googletranslate.blogspot.com/2015/10/two-new-translate-features-coming-your.html
 ireo hadisona mila sorohana : http://yourpolishtranslator.com/2015/10/networking-tips-for-translators-part-2-of-4/